Zimbabwe Christian leader criticizes lack of action by the churches
The leader of Zimbabwe's largest functioning alliance of Christians says the country's main grouping of traditional Protestant churches and many wider church organizations have been too quiet on what is happening in his country.
Anglican head says Zimbabwe collapse is due to state corruption
The head of the Anglican church in Zimbabwe, Bishop Sebastian Bakare, blames State corruption and political patronage for a collapse in social services in Zimbabwe, where at least 20 people have died of cholera in recent weeks.
Zimbabwe's Christian students want election thugs brought to justice
Christian students in Zimbabwe have urged the country's new government expected to be forged out of a power-sharing agreement to ensure that perpetrators of violence that marred a presidential runoff election in June face the law.
Cautious response from British churches to Zimbabwe deal
The Methodist Church and the United Reformed Church have cautiously welcomed news of the power-sharing deal reached between the Zanu-PF and MDC political parties in Zimbabwe. But they have expressed concern about the practical realities.
World church leaders hope and pray for Zimbabwe progress
International church groups call for end of Zimbabwe NGO ban
A coalition of church organizations has called for the lifting of a ban by Zimbabwe that has prevented humanitarian aid agencies and non-governmental organizations from working in the country.